Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi oo Socdaal Taariikhi ah ku tagay Koonfurta Kuuriya iyo Taariikh Cusub oo u bilaabantay laba waddan | Somaliland Post
Home News Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi oo Socdaal Taariikhi ah ku tagay Koonfurta Kuuriya iyo...
Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi oo Socdaal Taariikhi ah ku tagay Koonfurta Kuuriya iyo Taariikh Cusub oo u bilaabantay laba waddan
Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-Un ayaa ballanqaaday Taariikh cusub oo ku saabsan xidhiidhka dalkiisa kala dhaxeeya Waddanka deriska la ah ee Kuuriyada Koonfureed.
Kim Jong-Un ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Woqooyiga oo abid cagta saara dhulka Kuuriyada Koonfureed tan iyo sanadkii 1953, xilligaasi oo uu dhammaaday dagaal lagu hoobtay oo dhexmaray labada dal.
Kim Jong-Un ayaa markii uu ka tallaabay xarriiqa kala qeybiya labada dal, waxa uu sheegay in la gaadhay billowga nabad dhex marta labada dal.
Kulanka labada hoggaamiye ayaa yimi bilo uun kaddib hanjabaadihii dhanka dagaalka ah ee ka imaanayay dhanka Wqooyiga.
Maxaa muhiim ka dhigaya kulankan?
Maxaa laga yidhi arrinta hubka Niyuukleerka?
Kim Jong-Un waxa uu usbuucii hore shaaciyay in uu hakinayo tijaabada hubkiisa Niyuukleerka.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa labaduba aad u soo dhaweeyay tallaabadaasi, balse cilmibaarayaal u dhashay dalka Shiinaha ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in goobta lagu tijaabiyo Niyuukleerka Kuuriyada Woqooyi aanan hadda la isticmaali karin maadaama uu dhagax weyn ku dhumay goobtaasi, xilligii ugu dambeeyay ee ay Pyongyang tijaabisay hubkeeda Niyuukleerka.
Marka laga soo taga arrinta la xiriirta hubka Niyuukleerka, hoggaamiyeyaasha labadani waddan waxaa la filayaa in ka wadahadlaan sidii rasmiyan loo dhameyn lahaa dagaalkii labada dal dhex maray 1950 ilaa 1953 iyo arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Sidee ayaa heerkan lagu soo gaadhay?
Dad yar ayaa saadaalinayay in horumar noocani ah laga gaari karo arrinta gacanka Kuuriya maadaama Kuuriyada Woqoooyi ay wali sii wadday kobcinta hubkeeda Niyuukleerka iyo tijaabada gantaaladeeda riddada dheer iyo dagaalka dhanka afka ah ee ay gunta u gashay laga soo billaabo sanadkii 2016 ilaa 2017.
Ifafaalada dib u heshiisiinta labadani dal ayaa soo ifbaxday bishii Janaayo ee sanadkan, xilligaasi oo Kim Jong-Un uu muujiyay in uu diyaar u yahay in uu wadahadal la yeesho Kuuriyada Koonfureed.
Bil kaddib, labadani dal waxa ay wada hugadeen hal calan xilli ay furmayeen ciyaaraha Olombikada qaboobaha.
Debecsanaanta diblomaasiyadeed ee uu muujiyay Kim waxay horseeday in xaaladda heerkan la soo gaarsiiyo, waxaana ka sii horreeyay kulan bishii Maarso uu la yeeshay mas’uuliyiin sarsare oo ka yimid dhanka Koonfurta.
Kulankaasi kaddib waxaa soo baxay warka ah in Kim Jong-Un uu sidoo kale la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Sidee ayuu kulanka ku billowday?
Hoggaamiyeyaasha labadani waddan ayaa dhanka Kuuriyada Koonfureed waxaa ku soo dahweeyay ciidamo ku lebisan dharka dhaqanka ee Kuuriyada Koonfureed, kuwaa oo ay ka qaateen salaam sharaf, kaddibna waxa ay gaareen dhismaha Nabadda ee ku yaalla tuulada Panmunjom, oo ah dhismo ku yaalla aag milatariga ka caagan oo u dhaxeeya labadani waddan.
Dadka Kuuriyada Koonfureed ayaa aad ula dhacay markii ay arkeed labadani nin oo gacmaha is haysta oo marba dhinac uga tallaabaya qadka kala qeybiya labada dal.
Markii hore, Kim Jong-Un ayaa u tallaabay dhanka Koonfurta halkaa oo uu ku salaamay dhigiisa Koonfurta Moon Jae-in. Kaddib waxay isla aadeen dhanka Woqooyiga, ka hor inta aysan ku laaban dhanka Koonfurta iyaga oo gacmaha is haysta.
Marka la eego qaabka ay labadani hoggaamiye u kulmeen, waxaa la dareemi karaa in aan horey loo sii qorsheyn waxyaabaha qaar ee ay sameynayeen sida in marba ay dhinac u tallaabaan.
Qeybtii hore ee kulanka ayaa soo dhammaaday waxana hoggaamiyeyaashani uu midba goonidiisa u aaday qado. Kim waxa uu woqooyiga u aaday qada, isaga oo raacay baabuur kuwa raaxada ah oo aad loo ilaalinayo.
Maanta gelinka dambe ayaa loo ballansan yahay in wadahadalka la sii wado.
Kulanka ayaa waxaa sidoo kale hareeyay kaftan kaddib markii Kim Jong-un uu yiri ” waxaan filayaa in aad ka heli doontaan baastada aan keenay.”
Kim horaan loogama baran kaftan gaar ahaan marka ay timaado arrin u dhaxeysa dalkiisa iyo dalka deriska ah ee Kuuriyada Koonfureed iyo waliba Mareykanka.
Muxuu yahay qorshaha maanta?
Wax kasta oo kulankani ku saabsan horey ayaa loo sii qorsheeyay, gaar ahaanna jadwalka wadahadalka iyo xitaa nooca cashada caawa loo ballansan yahay.
Kulan loo ballansan yahay galabta ayaa hoggaamiyeyaashani waxa ay si wada jir ah u tallaali doonaan geed, iyadoo carrada iyo biyaha lagu tallaalayo laga keenayo labada dal. Ujeedadan ayaa ah in la muujiyo astaan nabadeed.
Kulanka ayaa ku soo dhammaanaya hoggaamiyeyaashani oo wadajir u saxiixaya heshiis, waxa ayna wadajir u jeedin doonaan hadal, ka hor inta aysan casho tegin.
Kim waxaa wadahadalka ku wehliya sagaal mas;uul oo kale, waxaana ka mid ah walaashii Kim Yo-jong oo awood iyo saameyn weyn ku leh arrimaha dalkaasi.